Nosy Greek | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialantsasatra any Eropa, Gresy
Firenena nofinofy i Gresy. Paradisa ho an'ireo tia tantara, zavakanto ary gastronomie any Mediterane. Izy io dia manana zorony mahaliana maro hita, na dia ny mpizaha tany malaza indrindra aza dia ny Atena sy ny Nosy Greek.
Na fialantsasatra ho an'ny fianakaviana izany, fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro na hankafizanao fotsiny ny fitoniana amoron-dranomasina, ny Nosy Greek dia toeran-tsoa mahafinaritra hitsidihana indray mandeha na imbetsaka. Rehefa dinihina tokoa, ny Nosy Greek dia iray amin'ny harena mampiavaka ity firenena mahafinaritra ity.
Azo inoana fa rehefa mieritreritra ny Nosy Greek isika, ny voalohany tonga ao an-tsaintsika dia ny Santorini, fitambarana toerana arkeolojika, torapasika hafakely ary fiposahan'ny masoandro mahafinaritra miaraka amin'ny Ranomasina Aegean ao aoriana.
Azo antoka fa efa hitanao mihoatra ny indray mandeha ny karatra paositry ny trano vita amin'ny loko fotsy sy ny fonenany mifanohitra amin'ny manga-dranomasina mangirana. Na dia hafahafa aza ny torapasika, dia tsy izy no mahavariana indrindra any Gresy, na dia misy zavatra azo tsapain-tanana rehetra aza: ohatra, i Kamari dia manana fasika mainty raha ny Red Beach sy ny Kameni Beach kosa manana rano be vy sy solifara.
Ny renivohitr'i Santorini dia Fira. Ny sasany amin'ireo toerana mahaliana indrindra hita eto dia ny katedraly Orthodoksa, ny tranombakoka arkeolojika, ny tranombakoky ny prehistory na ny fiangonan'ireo lakolosy telo.
Noho ny fientanentanana betsaka ao amin'ny nosy dia mitaky ny filanao, tsy misy tsara noho ny mijanona ao amin'ny trano fisakafoanana hanandrana lovia nentin-drazana toy ny akoho na henan-kisoa, mousaka na hazan-dranomasina.
Io no fijanonana malaza indrindra ho an'ireo mitady fahafinaretana ary nahazo laza ho an'ny fanangonana ireo trano fisotroana tsara indrindra any amin'ny Nosy Greek. Raha te hanao fety ianao dia hahita an'ity paradisainao ity amin'ity sombin'ny Cyclades kely ity.
Chora na Mykonos Town no ivon-tanàna sy renivohitry ny nosy. Eo no misy ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny, fivarotana ary trano fisakafoanana, koa tena velona ny atmosfera, indrindra amin'ny alina. Ao Chora, ny barana hisotroana dia miompana amin'ny Little Venice sy ny disko amoron-tsiraka atsimon'ny nosy.
Na izany aza, tsara ny mahafantatra ny lafiny mangina ao an-tanàna amin'ny maraina, na vao maraina na miverina tara amin'ny fety. Zara raha misy olona eny an'arabe ary toa toerana hafa tanteraka izany, feno filaminana.
Corfu, iray amin'ireo nosy grika tsara indrindra, dia ilay toerana niafenan'i Jason sy ny Argonauts taorian'ny nangalariny ny volon'ondry volamena. Amin'izao fotoana izao, ny renivohitry ny nosy dia toerana feno fanintona miaraka amin'ireo trano fisakafoanana, fivarotana ary fiainana andavan'andro maro.
Ny tanàna dia mitazona ny rivotra tena misy an'ireo faritra tsy dia misy fitsidihana, miaraka amin'ireo tranobe taloha misy endrika miloko ary manala ny volan'ny fotoana sy akanjo mihantona eny amin'ny lavarangana. Saingy manana faritra misy rivo-piainana misimisy ihany izy io izay anasan'ny mpivarotra sy ny mpanao asa tanana anao hividy fahatsiarovana ho fahatsiarovana fitsangatsanganana manokana any amin'ny Nosy Greek.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Gresy » Nosy Greek